I-Amazon Echo Show 10, isikrini, isandi kunye nokuyila, ngaba kufanelekile? | Iindaba zeGajethi
I-Amazon Echo Show 10, isikrini, isandi kunye nokuyila, ngaba kufanelekile?
UMiguel Hernandez | 11/06/2021 10:00 | ngokubanzi, Reviews
Amazon iyaqhubeka nokusebenza ngokuzisa izixhobo zayo ze-Alexa emakhayeni ethu ngendlela elula, abo banoxanduva lokubonelela ngamathuba okwenza ikhaya elidityanisiweyo ngexabiso lokungena kunye namandla anokulindeleka kubuchwephesha bangoku.
Lo mboniso we-Echo 10 yenye yezongezo zamva nje kwaye ngaphandle kwamathandabuzo ezona zinomdla ngokwikhathalogu epheleleyo yenkampani. Siza kuhlalutya nzulu iAmazon Echo Show 10 entsha evela kwinkampani kaJeff Bezos kwaye ubone ukuba isebenza njani, Fumanisa nathi kwaye ke uya kuthi uqonde ukuba kufanelekile okanye awufumani namnye kubo.
3 I-Alexa iya kukulandela naphina
4 Isikrini kunye nesandi
5 Sebenzisa amava
Ngeli thuba, iAmazon ikhethe uyilo olulungeleleneyo, ngaphandle kokuba ukuza kuthi ga ngoku isithethi besibekwe ngasemva kwesikrini njengolwandiso, ngoku isikrini kunye nesithethi zilungiselelwe ngokuzimeleyo kodwa ngokudibeneyo. Isandisi-lizwi simi ngasemva, sisilinda ngokupheleleyo, sigutyungelwe yinayiloni ngemibala enikezelwa yinkampani yaseMntla Melika. Ngokwenxalenye yayo, isikrini sinengalo ehambayo kwicala elithe nkqo eliya kubamba iphaneli yeLCD. Ukuba iyakuqinisekisa, ixabiso layo lijikeleze i-euro ezingama-249,99 kwiAmazon.
Imibala ekhoyo: I-Anthracite
Iphaneli yeLCD iya kuba liziko lemithambo-luvo yeAmazon Echo Show 10 ngekhamera ebekwe kwindawo ephezulu ngasekunene, ngelixa kwi-bezel ephezulu siya kuba «nesimumu» iqhosha kunye namaqhosha alawula umthamo wesithethi. Iphaneli ye-intshi ezi-10 ibalulekile, kodwa njengoko kuhlala kunjalo kwezi mveliso zenqanaba lokungena ezivela kwinkampani kaJeff Bezos, iplastiki matte iya kuba phambili. Njengenzuzo enomdla, kwinkqubo yoqwalaselo siya kulungelelanisa ukuhamba kwescreen, kwaye lelinye lawona manqaku matsha emveliso kwaye siza kuthi sichaze ngakumbi apha ngezantsi.
Ngokubhekisele kubukhulu kunye nobunzima, sifumana isixhobo esinobunzima, sinee-2,5 kilograms esingaziva ngaphezulu kokuba ibhokisi ifikile. Ngokumalunga nobukhulu, sine-251 x 230 x 172 millimeter, nangona inokubonakala ngathi "iphambili", inyani kukuba uyilo lwayo luyayinceda ukuba ingangxami kakhulu nangona iphaneli yayo ejikelezayo eyi-intshi ezi-10 ngokuthambeka kwemanyuwali.
Isixhobo sinonxibelelwano olungenazingcingo I-WiFi ac netekhnoloji ye-MIMO kunye ne-A2DP kunye ne-AVRCP protocol, Nangona kunjalo, ngokusisiseko sinethebhulethi yoMlilo yeAmazon "encanyathiselwe" kwisithethi. Nyusa isikrini kumqhubekekisi Imithombo yeendaba iMediaTek 8113 Ngomqhubekekisi wesibini esingazaziyo iinkcukacha zobuchwephesha, ezichazwa yiAmazon njengeAZ1 Neura Edge, sicinga ukuba ijolise ekusebenzeni kwe-Alexa.
Ikhamera ye-10 MP enenkqubo yokutshixa ngomatshini
2.1 Inkqubo yestereo
I-2x - 1 iTweeters
Ibandakanya iadaptha yamandla engama-30W enezibuko le-AC
Sine-Zigbee protocol Kwikhaya lethu elidityanisiweyo kunye nesixhobo sokukhanya esikufutshane, njengoko kusenzeka kwezinye izithethi zesikrini ezivela kwinkampani yaseMelika. Kuya kufuneka sithethe ngemoto yayo engasebenzisi brashi kunye nokujikeleza okungu-180º okuyakuyivumela ukuba isilandele kwikhamera yesixhobo. Asinayo idatha malunga ne-RAM okanye ukugcinwa kwangaphakathi kwesixhobo.
I-Alexa iya kukulandela naphina
Kuqwalaselo siza kubeka i-engile yokujikeleza kunye nendawo esiya kuyo isixhobo, njengoko besesitshilo ngaphambili, silandele lo gama sithetha nayo okanye sisenza izinto. Oku kunomdla ngakumbi xa, umzekelo, sisekhitshini kwaye sifuna ukwenza iresiphi, okanye sibukele ividiyo yethu ethile ngaphandle kweengxaki ezininzi. Ngaphandle kwamathandabuzo, kubonakala ngathi yimpumelelo yokwenyani ukuba sithathela ingqalelo ukuba lelinye lawona manqaku abuthathaka kwi-Echo Show yangaphambili, ke asinangxaki kwii-angles zokubukela.
Ngokufanayo, sinenkxaso yokuba izakusivumela ukuba silungelelanise i-engile yokujonga ngokuthe nkqo, ayininzi, kodwa yanele ukuyenza ikhululeke kangangoko kunokwenzeka ukuba uyisebenzise. Isikrini siphendula kakuhle kwaye amandla okuqaqamba angaphezulu kokwaneleyo.
Isikrini kunye nesandi
Siqala nge-sunod, le Echo Show 10 iyazikhusela kakuhle, ine-neodymium woofer ye-intshi ezintathu kunye nee-tweeters ezimbini-intshi enye. Ngokucacileyo ikude neAmazon Echo Studio, kodwa inikeza isandi esingcono kancinci kuneAmazon Echo yesi sizukulwana. I-mids kunye ne-bass zihlonitshwa kancinci kwaye ziboniswa ukuba zinokhetho olwaneleyo lokugcwalisa naliphi na igumbi okanye igumbi, nangona isenokuba ngumgangatho ongonelanga kwigumbi elinesisa. Ungayithenga kwiAmazon, njengendawo yokuthengisa rhoqo, nangona ikwakhona nakwiMediaMarkt.
SineDolby Atmos ukuhambelana, Ukuphazamiseka kuphantsi kwaye kukhuselwe ngendlela enesidima. Ngokucacileyo kuthatha umrhumo kwi-bass, kodwa i-mids kunye neendawo eziphakamileyo zinomgangatho owaneleyo.
Ngokubhekisele kwiscreen sinee-intshi ezili-10,1 zepaneli yokubamba IPS LCD. Isikrini asisigeza, sine Isisombululo esingu-1280 x 800, okt HD, eqhubeka nokungonelisi ukonwabela umxholo wemultimedia njengoko kufunwa yimigaqo, ihlazo elinepaneli ezili-10. Asinalo naluphi na uhlobo loqhagamshelo lwangaphandle ngohlobo lokugcinwa kwemultimedia, ke siyakuzikhawulela kwiifoto zeAmazon okanye iinkonzo zonxibelelwano zamafu ezixhaswa sesi sixhobo.
Lo mboniso weAmazon Echo usebenza kwakhona njengokwandiswa kwe-Alexa kwikhaya elixakekileyo, ndiyithande kakhulu ekusebenziseni kwayo nangona inganikeli naliphi na icandelo elitsha ngokubhekisele kwiNkqubo yokuSebenza ezinye iinguqulelo zeAmazon Echo Show mount. Sinesixhobo esiphendula kakuhle kwaye esivumela ukuba sihlengahlengise zonke iiparameter zezixhobo ezazingqanyaniswe ngaphambili neAmazon Alexa.
Kwimeko yam, zonke izixhobo ze-IoT ekhayeni lam ziyilelwe kwaye zinxibelelane ne-Alexa, ke kuye kwahlala kamnandi kwaye ndinomdla wokuba ndisebenze kunye nePhilips Hue, izixhobo zeSonos kunye nemeko yomoya equlunqwe ngeBroadLink. Ewe kunjalo, sithathela ingqalelo into yokuba sijamelene nesixhobo esinexabiso eliqhelekileyo elijikeleze i-euro ezingama-250. Iya kusebenza njengenyathelo elinye kwizixhobo eziqhelekileyo zekhaya, kwaye ngokunyaniseka, yenza ukuba ulawulo lwasekhaya oluxhunyiwe lunyamezeleke ngakumbi kwiscreen sayo, kuba yinto entle ukuba nayo ekhitshini okanye epasejini, kodwa kukude ukuba sisixhobo songeniso kuluhlu ngexabiso.
I-Echo Show 10 (2021)
Ithunyelwe nge: 11 Juni ka 2021
Utshintsho lokugqibela: 6 Juni ka 2021
Iprotocol yeZigbee kunye nescreen esikhulu
Isandi asihambelani nesithethi se-euro ezingama-250
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Amazon Echo Show 10, isikrini, isandi kunye nokuyila, ngaba kufanelekile?
I-Echo Show 5 (2021) -Ikhamera engcono kunye nesandi kwesi sizukulwana sitsha [UHLAZIYO]
I-Clam Elite, enye indlela ene-ANC ngoncedo lwe-Fresh'n Rebel